Ngilungiselele Kanjani Izithombe Zami Ezifakiwe Kwezenhlalo Yezindaba Nokukhuphuka Kwezokuxhumana Komphakathi ngo-30.9% | Martech Zone
NgoMsombuluko, Mashi 1, 2021 ULwesithathu, April 27, 2022 Douglas Karr
Ngasekupheleni kukaNovemba, ngithathe isinqumo sokuhlola ukuthuthukisa i izithombe ezifakiwe ngoba social media ukubona ukuthi kuzoba nenzuzo yini. Uma uke waba ngumfundi noma obhalisile isikhashana, uyazi ukuthi ngihlala ngisebenzisa isiza sami ukuzama kwami.
Ukuklama isithombe esiphoqayo esabiwe ezinkundleni zokuxhumana kungeza imizuzu emi-5 noma eyishumi ekulungiseleleni kwami ​​i-athikili ngakho-ke akuyona imali enkulu yesikhathi… kepha imizuzu ihlale ihlanganisa futhi ngifuna ukuqaphela ukuthi ngisebenzisa isikhathi sami ngokuhlakanipha uma kuziwa Martech Zone.
Ngenkathi ngangivame ukuthatha izithombe ezithile zesitoko ezazimele okuqukethwe, ngamabomu ngakha isithombe esifakiwe esinokulandelayo:
Usayizi - Ngakhe ithempulethi ku- Umfanekisi lokho 1200px ububanzi ngo-675px ubude. Ngiphinde ngaguqula itimu yami ukukhombisa izithombe ngaleli nani elungiselelwe.
zokuphawula - Angifaki igama lesayithi kepha ngihlala ngifaka i-logo ukuze ibonakale ngokuqhubekayo kuzibuyekezo zami zokuxhumana.
Isihloko - Isihloko esicindezelayo akudingeki ngaso sonke isikhathi sifanise umbhalo uqobo ku-athikili yami. Ngingahle ngithuthukise isihloko seposi ngosesho kodwa ngibhale kabusha isihloko emfanekisweni wami ukuzama ukushayela ukuchofoza okuningi.
isithombe - Nginokubhaliselwe Depositphotos lapho engingasesha khona kalula futhi ngithole imifanekiso emihle engingayilanda futhi ngiyifake.
Ngibe sengisebenzisa FeedPress ukushicilela ngokuzenzakalela izindatshana zami eziteshini zami zenhlalo. umphumela yi-tweet noma isibuyekezo se-Facebook esivelele ngempela. Nakhu ukuthi kubukeka kanjani Twitter:
Uwukondla Kanjani Umkhangiso Wedijithali https://t.co/QMp6i6aq18 #imvumodel pic.twitter.com/3o1O2D6ssB
- martech zone (@mzokoloko) February 28, 2021
Futhi kuqhubeke LinkedIn:
Ngenxa yokuthi izihloko zibhalwe ngesiNgisi, ngihlaziye izinyanga ezimbalwa ezedlule, ngasusa noma yikuphi okuthunyelwe ngamagciwane, futhi ngilinganisela izethameli e-United States, Canada, United Kingdom, New Zealand nase-Australia. Imiphumela yethusa impela…
Ngaphakathi kwe-Google Analytics, ukuhlaziywa kwesikhathi ngezikhathi ezithile kokudluliselwa kwami ​​kwabezindaba zenhlalo kuholele ku I-30.9% yanda ekubukweni kwamakhasi okuvela ezinkundleni zokuxhumana lapho izithombe zami ezifakiwe zenziwe ngcono.
Kuyathakazelisa ukuthi isiteshi semidiya yokuxhumana engichitha isikhathi esincane ngisebenza kuso… ekhasini le-Facebook, sibe nokwenyuka okuphawuleka kakhulu… ukunyuka okungu-59.4%.
Akuphelele konke… ngiqaphele ukuthi isikhathi sami esimaphakathi ekhasini namakhasi ekuvakasheni ngakunye kwalezi zivakashi ezintsha besiphansi (ngaphansi kuka-10%) ngakho-ke ngenkathi ngisaheha izivakashi eziningi, angikenzi umsebenzi omuhle ukuzigcina lapha.
Ngiyaqhubeka nokusebenza ngithuthukise isiza ngezinye izindlela, ikakhulukazi ngidlula amakhulu ezindatshana ezindala ngesonto, ngivuselela ezinye, ngisuse ezinye, ngiqondise eziningi, futhi ngisebenze ngekhwalithi ephelele yesayithi. Ngisebenzise futhi i- inkonzo yokuhumusha ezenzakalelayo okubonile isibalo sezivakashi sinyuka sivela emazweni angakhulumi isiNgisi.
Imizamo ikhokha kakhulu ekuthengeni… izibalo zonyaka nonyaka ezinsukwini ezingama-30 ezidlule:
I-Direct Traffic inyuke ngo-58.89%
Usesho lwe-Organic lukhuphuke ngo-41.18%.
I-Social Media Traffic inyukile ngama-469.70%
Sekukonke, isiza sami sicishe saphindeka kabili ithrafikhi yaso… engijabule ngayo!
Udinga Usizo Ngokumaketha Kwakho Kwedijithali?
Uma ungathanda ukuhlolwa kwesayithi lakho ngamasu athile angathuthukisa ukutholakala kwakho, zizwe ukhululekile ukuxhumana nami ku Highbridge. Ngingakwenzela ucwaningomabhuku, nginike iqembu lakho ukuqeqeshwa, noma ngikwenze njengeklayenti ukukusiza uthuthukise imiphumela yakho yokumaketha edijithali. Ngazi kahle nokwenza kahle kwesiza seWordPress uma udinga ingqalasizinda yangempela nosizo lwentuthuko.
Ukudalula: Ngisebenzisa izixhumanisi ezihambisanayo zezinsizakalo ezahlukahlukene kule ndatshana.
Tags: izithombe ezifakiweusayizi wesithombe semidiya yomphakathiizithombe zokuxhumana nabantuukubuka kuqala kwezokuxhumanaithrafikhi yezokuxhumana
Amaphutha ayi-11 Okufanele Uwagweme Ngemikhankaso Yakho Yokumaketha Ye-imeyili